September 7, 2019 - ThutaSone
September 7, 2019 ThutaSone 0
ခေါင်းသိပ်ကိုက်လျင် (ခေါင်းခဏဏကိုက်နေသူများအတွက် လက်တွေ့နည်းလမ်းကောင်း) နည်းလေးက အမှန်လွယ်သလိုတကယ်ပဲထိရောက်ပါသည်။ ထူးထူးထွေထွေလုပ်စရာလည်းမလိုပါ။ လူတိုင်းလက်တွေ့စမ်းကြည့်နိုင်တဲ့နည်းပါ။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ပါက ကြက်သွန်ဖြူတစ်ဥ၊တစ်မွှာကို ခွာပြီးထုထောင်းပါ ပြီးလျင်စက္ကူပါးလေးတွင် အစေးကိုသုတ် လိမ်းပြီး ခေါင်းကိုက်သည့် နားထင်ဘက်တွင် ကပ်ထားလိုက်ပါ။ ခေါင်းနှစ်ခြမ်းစလုံးကိုက်ပါလျင် နားထင်နှစ်ဘက်လုံးကို စက္ကူပါးလေးကပ်လိုက်ရုံပါပဲ..။ချက်ချင်းကို ချွေးတွေပွင့် ထွက်လာပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာ သက်သာပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မည်။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းမှရသော […]
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်ရမယ့် ပွဲစဉ်အတွက်“ဝိတ်တန်းမတူပေမယ့် စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူး. .ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး. .”ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်း. .
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်ရမယ့် ပွဲစဉ်အတွက်“ဝိတ်တန်းမတူပေမယ့် စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူး. .ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး. .”ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆိုင်း. . ကမ႓ာမှာ မြန်မာဟေ့လို့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သော မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် နှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆိုင်းကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်ရမယ့် ပွဲစဉ်အတွက် မစောင့်နိုင်အောင် ဖြစ်နေပါပြီတဲ့နော်. အာရှ ရဲ့ အကြီးမားဆုံး […]
သမ္မတကြီးမွန်း .. ရေးသားတဲ့ နှုတ်ဆက် စာသဝဏ်လွှာ၊ ဖတ်ရင်းက မျက်ရည်တောင် ဝဲမိပါတယ်
သမ္မတကြီးမွန်း .. ရေးသားတဲ့ နှုတ်ဆက် စာသဝဏ်လွှာ၊ ဖတ်ရင်းက မျက်ရည်တောင် ဝဲမိပါတယ် ။ စာရဲ့ အစမှာ ရန်ကုန်မိုးဟာ စပါးနှံတွေကို စွတ်စိုစေရင်း ..အပူတွေကို လျော့ကျအေးမြစေရင်း .. ကျနော်တို့ အားလုံးရဲ့ ရင်ကို ခဏတာ လွတ်လပ်မှု ရရှိစေပါတယ်။ လို့ .. […]
ရသမျှ အစားအစာ ကိုမသန်စွမ်းဇနီးကို ကျွေးရင်း ကိုယ်တိုင်က တိတ်တိတ်လေး အငတ်ခံနေခဲ့တဲ့ အဖိုး
မသန်စွမ်းဇနီးကို ရသမျှ အစားအစာ ကျွေးရင်း ကိုယ်တိုင်က တိတ်တိတ်လေး အငတ်ခံနေခဲ့တဲ့ အဖိုး လူတိုင်းမှာ အချစ်တစ်ခု အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ထောင်တဲ့ အခါ ဘယ်တော့မှ ခွဲမသွား ပါဘူး၊ ပစ်မထားခဲ့ပါဘူး၊ တသက်လုံး စောင့်ရှောက်ပါ့မယ် ဆိုတဲ့ နှုတ်ကတိလေးတွေ ထုံးစံအတိုင်း ပေးကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် […]
သင့်ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်ကို ပြောပြပေးလိမ့်မယ်အကြိုက်ဆုံး ပုံကို ရွေးလိုက်ပါ
သင့်ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်ကို ပြောပြပေးလိမ့်မယ်အကြိုက်ဆုံး ပုံကို ရွေးလိုက်ပါ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိကြတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးပုံ တစ်ပုံရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ တကယ့် အတွင်းစိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ တပ်အပ်ပြောဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် […]
BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှုးအား ဖမ််းဆီး
အင်းစိန်် BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှူးဒေါက်တာအောင်ဇော်ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက််ဖျက်ရေး ဥပဒေနဲ့ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က အင်းစိန်မြို့မ ရဲစခန်းကနေ ဖမ်းဆီးစစ််ဆေးနေတယ်လို့ အင်းစိန်မြို့မ ရဲစခန်းက ဒီဗွီဘီကို အတည်ပြုပြောပါတယ်။ စက်ရုံမှူးဖြစ်သူ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက် စားမှုှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က တရားလို တိုင်ကြားအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး […]
ကောင်မလေးကို မထိတထိ စသည့် လူအား မကျေနပ်၍ ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့
ကောင်မလေးကို မထိတထိ စသည့် လူအား မကျေနပ်၍ ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ ဖုန်းဆိုင်ရှိ ၁၇ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးကို မကြာခဏလာလာစသည့် ၄၅ နှစ်အရွယ်ဦးလေးကြီးကို မကျေနပ်၍ ဦးခေါင်းအား ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ ဖြူး၊ စက်တင်ဘာ ၆။ ဖုန်းဆိုင်ရှိ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ ်ကောင်မလေးကို […]
အစာလည်​်း​ဆေး…​ဆေးလည်​းအစာကျောက််ကပ်နှင့့်် အူကျခြင်းတို့အတွက် မုန်လာဥဖြူ
အစာလည်​်း​ဆေး…​ဆေးလည်​းအစာကျောက််ကပ်နှင့့်် အူကျခြင်းတို့အတွက် မုန်လာဥဖြူ အစာလည်​်း​ဆေး…​ဆေးလည်​းအစာ မုုန်​လာဥဖြူ တစ်​လုံးနဲ့ ကျောက်​ကပ်​အလွယ်​​ဆေးကြမယ်​် ​​ကျောက်​ကပ်​​ရောင်​သည်​ဖြစ်​​စေ ​ကျောက်​ကပ်​​ကျောက်​တည်​သည်​ဖြစ်​​စေ ​ကျောက်​ကပ်​​ကြောင်​့ ခါးနာ ခါးကိုက်​ခြင်း နှူံးချိ ​အော့အန်​ခြင်​းများ အတွက်​။ မုန်​လာဥဖြူ တစ်​လုံးကိို ​သန်​့စင်​စွာ​ဆေး​ကြောပြီး ​ရေအနည်​းထည်​့၍ ကြိတ်​​ချေပါ၊ အဖတ်​များစစ်​ထုတ်​ပြီး အရည်​ကို​သောက်​လိုက်​ပါ။ ၎င်းကြိတ်​ရည်​ ဝမ်​းထဲဝင်​သွားသည်​နှင်​့် ခါးနာခါးကိုက်​ယူပစ်​သလို​ပျောက်​ကင်​းသက်​သာသွားမည်​။ […]
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်ပိုမိုအားကောင်းလာတဲ့ လေဖိအားနည်ရပ်ဝန်း နှင့် မိုးလေဝသအခြေအနေ
ကျန်းမာတော်မူကြပါစခင်ဗျာ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ(၇) ရက်နေ့ အတ ွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တ ွင်မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်း တ ွင် လေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီး ၊ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အဆိုပါလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် အ ခြေ အ […]
ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘတ်ကို စောင်းအိပ်တက်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီ
ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘတ်ကို စောင်းအိပ်တက်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီ ဘာကြောင့် ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သင်ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ သင်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကိုအရေးတကြီး ပတ်သတ်နေလို့ပါပဲ။ အကယ်၍ သင်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်လေ့မရှိရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ရင်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်သို့စောင်းအိပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတေက်တွေနဲ့ […]